परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ
परिणाम आउनेगरी काम भइरहेको छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता, स्लाइड December 27, 2017	0 182 Views
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको छ महिना नाघिसके को छ । जनप्रतिनिधि आए विकासले गति लिने आशा गरे का नागरिकहरु तत्काल परिणामको आशामा छन् तर जनचाहनाअनुसारको काम भएको दे खिदै न । जनअपे क्षाअनुसार काम हुन किन सके को छै न वा नया“ संरचनामा आधार तयार गर्दागदैर् दिन बिते को छ । यसै सन्दर्भमा घो राही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौ धरीसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
उपमहानगरपालिकाका दै निक गतिविधि के भइरहे का छन् ?
जनताको दै निक जीवनस“ग जो डिएका कामहरुलाई हामीले छिटो छरितो रुपमा सम्पादन गदैर् आइरहे का छौ ं । कुनै उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट हुन्छन् भने कुनै सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पनि हामीले प्रशासनिकलगायतका काम गरिरहे का छौ ं । खासगरी से वा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष धे रै जसो वडाका कार्यालयहरु स् थापना गनेर् चरणमा लागे का छौ ं । कार्यालय नभएका वडाहरुमा यसै वर्ष कार्यालय स् थापना गनेर् बजे टको विनियो जन भइसके को छ र आउने बै ठकबाट नै निर्णय गरे र काम अघि बढाउने तयारी भइरहे को छ । यसै गरी एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउन जनतालाई सहज हो स् भने र प्रत्ये क व्यक्तिका फाइल खो ज्नुपनेर् झञ्झटिलो अवस् थालाई अन्त्य गदैर् हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फाइल हस् तान्तरण गरे का छौ ं र कर बुझाउन आउ“दा न्यायपूर्ण हो स् भने र डिजिटल टो कन प्रणालीसमे त लागु गरिसके का छौ ं । हामीस“ग कर्मचारी अभाव छ, जे छ त्यही जनशक्तिबाट हामीले से वालाई सहज बनाउने प्रयास गरे का छौ ं ।
आज हुने काम भो लि आउनु भन्ने अवस् थाको अन्त्य भयो त ?
सामान्यतयाः प्रक्रिया पूरा गरी आएका जनताका कामलाई तत्काल गदैर् आएका छौ ं । कतै ढिलासुस् ती भएको छै न । कतै त्यस् तो भएको जनगुनासो आए तुरुन्तै सम्बो धन गछौर् ं । तर पुग्दो जनशक्ति नहु“दा जनअपे क्षाअनुसारकै काम गर्न कठिनाइ भइरहे को छ, तर पनि नियतवश हुने ढिलासुस् ती कतै भे टिए तत्काल एक्सनमा जान्छौ ं ।
घो राही उपमहानगर अलि सुस् त गतिमा हि“ड्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ त ?
दै निक से वा प्रवाहमा हामीले चुस् तता ल्याएका छौ ं । जनताले तुरुन्तै परिणाम खो जिराख्नुभएको छ । हामीले त्यो परिणाम दिने खालका काम गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले पनि अवरो ध सिर्जना ग¥यो  । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै निर्वाचन सम्पन्न गनेर् तिर नै लाग्नुप¥यो  । निर्वाचनपछि हामीले त्यस् ता परिणाम दे खिने खालका धे रै कामहरु अघि बढाइसके का छौ ं । भौ तिक संरचना निर्माणका कामहरु अघि बढिसके का छन् । नया“ पुराना यो जना निर्माण तथा कानून बनाउने काम पनि भएका छन् । नगर प्रो फाइल बनाउने कुरा एक चरणको काम अघि बढिसके को छ । एशिया फाउण्डे शनले त्यो काम गनेर् छ, जसले नगरको वस् तुगत अवस् था के हो भन्ने कुरा दिनसक्छ । त्यस् तै नगरको गुरुयो जना निर्माणका लागि पनि कार्यदल गठन गरे र काम थालिएको छ । यस् तै चालु आर्थिक वर्षमा बजे ट विनियो जन गरिएका यो जनाहरु सम्पन्न गनेर् दिशामा हामी छांै  । विशे षगरी बाटो लाई हामीले प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । हरे क वडामा बाह्रै महिना र चौ बिसै घण्टा यातायात सुचारु गनेर् हुनुपर्छ र वडा कार्यालयदे खि नगरको के न्द्रभागस“ग जो ड्ने मान्यताअनुसार कामलाई तीब्रता दिइएको छ । यसै वर्ष धे रै बाटाहरु कालो पत्रे हु“दै छन् । यसै वर्ष कुइरे पानीदे खि सर्रासम्मको बै कल्पिक मार्गको सवेर् भइसके को छ । बजे ट विनियो जन भएको छ अब छिट्टै काम गर्नका लागि टे ण्डर गदैर् छौ  । त्यस् तै नगरभित्रका विभिन्न सडक कालो पत्रे का लागि सवेर् भइसके का छन् । कतिपय उपभो क्ताहरुले गदैर् हुनुहुन्छ भने कतिपय टे ण्डरमार्फत गनेर् कार्यक्रम छ । त्यस् तै पा“च करो डको लागत सहभागितामा गनेर् यो जनाहरु आउने बै ठकबाट छनो ट गरिसक्ने छौ ं । त्यसकारण छिट्टै विकासको परिणाम हामीले जनतामाझ ल्याउने छौ ं । वडाबाट छानिएका सबै यो जना कार्यान्वयनमा गइसके का छन् । बजे ट पनि छ र यस वर्ष राम्रो परिणाम आउने गरी काम भइरहे को छ ।
बजे ट धे रै आउने तर काम नहुने त हो इन ?
त्यस् तो ह“ुदै न । बजे ट फ्रीज हुन दिइने छै न । जे ठ भित्रै सबै काम सम्पन्न गनेर् गरी हामी लागे का छांै  । हामीलाई विश्वास छ त्यसमा आम उपभो क्ता तथा जनताको साथ हुने छ । बजे ट फ्रिज हुने हो इन, बरु अरु बजे ट चाहिन्छ भन्ने सन्दे श दिन चाहन्छौ ं ।
वडा कार्यालयलाई आर्थिक अख्तियारी रो के र कसरी छिटो छरितो काम हो ला त ?
नया“ संविधानले जुन खालको अधिकारको व्यवस् था गरे को छ, त्यो अनुसारको ऐ न अझै बनिनसके को अवस् थाले के ही समस् या आएका छन् । अधिकारको हिसाबले त गाउ“मै सिंहदरवार ल्याइएको छ । तर के ही कानुनी अड्चनले व्यवहारमा पूर्ण लागु गर्न समस् या भएको छ । अब के न्द्र र प्रदे श सरकार बने पछि ती ऐ न कानूनले पूर्णता पाउने छन् र हामीले भने कै अधिकार व्यवहारमा पाउने छौ ं । अहिले पनि हामीलाई राज्यले पुग्दो कर्मचारी दिन सके को छै न । वडा कार्यालयमा कम्तिमा एकजना अधिकृतस् तरको कर्मचारी, ले खापाल, कम्युटर अपरे टर, मुखिया र एउटा कार्यालय सहयो गी चाहिने हो  । तर अहिले पहिले जे थिए उनीहरुलाई नै बा“डफा“ड गरे र काम चलाउनुपनेर् बाध्यता छ । यो अवस् थामा राज्यले नै आर्थिक अधिकार दिन नसके को अवस् था हो  । तर के ही दिनमै कर्मचारीको व्यवस् था गनेर् सरकारको तयारी छ भन्ने सुने को छु ।
जनताले महसुस गनेर् के काम भए जनप्रतिनिधि आएपछि ?
खासगरी हामी आइसके पछि सुधारका काम गरिएको छ । हामीले सरसफाइलाई अघि बढाएका छांै  । प्रत्ये क महिनाको १ र १५ गते सरसफाइ गनेर् अभियान थाले का छांै  । जहा“ सम्बन्धित क्षे त्रकै टो लबासीहरुको सहभागितामा यो काम भइरहे को छ । घो राहीमा फो हो र व्यवस् थापन गनेर् काम भएको छ । हामीले गल्ने र नगल्ने फो हो र छुट्याउन भने का थियांै । नगरबासीहरुले हामीलाई साथ दिनुभएको छ । फो हो र व्यवस् थापन गनेर् कुरा आफ्नै सरसफाइ गर्नु हो भन्ने कुरालाई सबै नगरबासीमाझ स् थापित गनेर् अभियानमा हामी लागे का छौ ं । फो हो रलाई समस् याको रुपमा भन्दा पनि मो हरमा परिवर्तन गनेर् प्रयासमा छौ ं हामीहरु । जस् तो गल्ने फो हो रबाट ग्या“स उत्पादन गर्नका लागि टे ण्डर गरे का थियौ ं । टे ण्डर परे र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसके को छ । हामीले फो हो रबाट उत्पादन गरे को ग्या“स सिलिण्डरमा भरे र बजारमा पठाउने छौ ं । आउ“दो एक वर्षभित्र यो काम हुन्छ । प्लाष्टिक व्यवस् थापनका लागि पनि हामी लागे का छौ ं । पुनःप्रयो ग गनेर् खालका वस् तुको गे ्रडिङ गरे र बिक्री गनेर् स् तरसम्म पु¥याउन प्रयास गरिरहे का छांै  । सके सम्म जिरो ल्याण्डफिलसाइटसम्म पुग्ने गरी अघि बढे का छौ ं । यसै गरी ट्राफिक जाम, अव्यवस् िथत फुटपाथका बजारहरु थिए । यसलाई पनि क्रमशः विकल्पसहित व्यवस् थापन गनेर् प्रयासमा हामी लागे का छौ ं ।
ठे ला व्यवसायी, सडकमा बिक्री गर्न राखिएका तरकारीलाई व्यवस् िथत गर्न एकखालको मण्डीजस् तै हाटबजार सञ्चालन गरिरहे का छौ ं । त्यस् तै मासु व्यवसायलाई व्यवस् िथत गर्न बधशालाका लागि बजे टको व्यवस् था गरिसके का छौ ं । त्यसको सवेर् भइरहे को छ । त्यस् तै बजारमा रहे का सिसि क्यामे रा मर्मत भइरहे का छन् भने मुख्य सडक फो रले न बनिरहे काले विद्युतका पो ल सार्नुपनेर् भएकाले के ही सिसि क्यामे रा सञ्चालनमा समस् या आएको छ । सडक बत्तीका लागि सो लार सुचारु गर्न थालिएको छ ।
त्यस् तै घो राहीमा प्रदूषणको पनि समस् या छ । यहा सिमे न्ट उद्यो ग भएकै कारणले पनि प्रदूषण थपिएको छ । कति प्रदूषण छ भन्ने नाप्ने यन्त्र अहिले सम्म हामीस“ग छै न । आउ“दो एक महिनाभित्र घो राही उपमहानगरपालिकाको प्रदूषण मापनका लागि वातावरण मन्त्रालयबाट यन्त्र आउ“दै छ । त्यसपछि मात्रै यहा“को प्रदूषणको अवस् था थाहा हुने छ । यहा“ उद्यो ग चलाउनुपर्छ, तर जनताको स् वास् थ्य जो खिममा पारे र कुनै पनि उद्यो ग चलाउन पाइ“दै न । चलाउने हो भने वातावरण सन्तुलन कायम गरे र मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा हामी काम गदैर् छौ ं । यसै गरी ज्ये ष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारी नियमअनुसार बै ंकमार्फत दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन वडा–वडामा पुगे र बै ंक खाता खो ल्न सम्बन्धित बै ंकलाई
अनुरो ध गरे का थियौ ं । के ही गुनासा आएका छन् । खासगरी बै ंकमा लामो लाइन लागे र भत्ता लिन आउनुपनेर् अप्ठे रो लाई न्यूनीकरण गर्न उहा“हरुको छुट्टै लाइनको व्यवस् था गरिदिन आग्रह गरे का छौ ं । त्यस् तै कर संकलनको काम पनि वडा–वडाबाटै गनेर् सो च बनाएका छांै  । त्यसलाई थप सहज बनाउन सबै वडामा इन्टरने ट जडान गरे र कम्युटर सिस् टमबाटै धे रै काम गनेर् यो जनामा हामी लागे का छांै  ।
चुनावमा उठाएका नारा लागु भए त ?
थुप्रै कुरा भएका छन् । खासगरी सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई हामीले लागु गरे का छांै  । ज्ये ष्ठ नागरिकहरुलाई घर–घरमै पुगे र स् वास् थ्य से वाको शुरुवात गरे का छौ ं । त्यसलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रम बनाएका पनि छौ ं ।
उपमहानगरलाई कस् तो बनाउने हो सपना दे ख्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि । पहिलो कुरा त घो राही उपमहानगरपालिकालाई स् मार्ट सिटी बनाउ“छांै भने का छौ ंं । हरित नगर बनाउ“छांै भने का छौ ं । कृषिलाई व्यवस् िथत गदैर् आत्मनिर्भर नगर बनाउ“छांै भने का छौ ं । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपो र्ट बनाउने सपना दे खे का छौ ं । यी सबै कामको शुरुवात भइसके का छन् । घो राहीका धे रै ठाउ“मा ड्याम निर्माण गनेर् यो जना बनाएका छौ ं । कतिपय बनिसके का छन् । मर्मत गर्नुपनेर् छ । कति नया“ बनाउनुपनेर् छ । यसै आर्थिक वर्षमा धे रै ड्याम बन्दै छन् । घो राही उपमहानगरपालिकाभित्र पानी संकलन र रिचार्जको काम मात्रै हो इन, यसलाई एउटा पर्यटकीय क्षे त्रको रुपमा विकास गर्नका लागि ती ड्यामहरुको विकास गरिने छ । बहुउद्दे श्यीयरुपमा माछापालन, खाने पानी सुचारु गनेर् र सिंचाईको व्यवस् था पनि हो स् भन्ने उद्दे श्यले ड्याम निर्माणको काम हु“दै छ । घो राहीलाई व्यवस् िथत शहरका रुपमा विकास गर्न चाहे का छौ ं । हिजो रो किएका बाटाहरु कालो पत्रे हुन थाले का छन् । हुन त त्यति गति लिन सके को छै न । तुलनात्मकरुपमा काम भएका छन् । यिनलाई छिटो छरितो रुपमा निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गनेर् काम भइरहे को छ । कटुवाखो ला, गुजेर् खो लालगायतका पुल निर्माणको काम शुरु भइसके को अवस् था पनि छ । त्यस् तै यहा“का मठमन्दिरहरुको संरक्षणको काम पनि शुरुवात भएका छन् । धारपानी मन्दिरको गुरुयो जना र सवोर् दय पुस् तकालयको गुरुयो जना बनाउने भने का छौ ं । त्यस् तै बाह्रकुने को विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआर तयार गरी आगामी वर्ष ठूलो यो जना सञ्चालन गनेर् तयारी भइरहे को छ ।
यस् तै यस वर्ष स् वास् थ्य क्लिनिक निर्माणका लागि प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा छौ ं । स् वास् थ्यको क्षे त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गनेर् यो जना छ । शिक्षाको क्षे त्रमा शिक्षक छनो ट कार्यविधि पास गरिसके का छौ ं । शै क्षिक गुणस् तर सुधार गर्नका लागि नीति निर्माण गरे र अघि बढ्ने को सिस गरिरहे का छौ ं । त्यस् तै कृषिमा पनि कार्यक्रम स् वीकृत भइसके का छन् । मान्छे हरुलाई लघुउद्यमतिर प्रो त्साहित गर्नका लागि तालिम दिने , युवाहरुलाई स् वरो जगार गराउने कुरा र पर्यटकीय क्षे त्रको विकासमा पनि हामी विशे ष जो ड दिएर अघि बढ्ने छांै  ।
विषयगत युनिट थपिएका छन् काम भएको छ कि अलमल छ“दै छ ?
यतिबे ला कृषि, शिक्षा, स् वास् थ्य, घरे लु भे टे रे नरीलगायत कार्यालयबाट युनिटहरु उपमहानगरपालिकामा आइसके को अवस् था छ । हाम्रो मातहत आइसके का युनिटहरुलाई शाखा, महाशाखाको रुपमा व्यस् िथतरुपले सञ्चालन गर्नका लागि भवनको व्यवस् था गरे र व्यवस् िथत गर्नतिर लागे का छौ ं ।
नगरबासीलाई के ही अनुरो ध गर्नु छ कि ?
हामीले विभिन्न कामहरु अघि बढाएका छौ ं । उपमहानगरबासीहरुलाई आफ्नो ठाउ“मा भइरहे का कामप्रति चासो राखिदिन र काममा सहयो ग तथा खबरदारी गरिदिनका लागि मे रो आग्रह छ । आउ“दा दिनहरुमा सबै को सल्लाह सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहे र गर्न चाहन्छु ।
Previous: तत्काल राजधानी तोक्न नागरिक समाजको माग
Next: छाडा गाई गोरुको जिम्मा सहकारीलाई